Boğaçay 38 Tugboat natomboka tamin'ny lanonana | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulBoğaçay 38 Tugboat natomboka tamin'ny lanonana
12 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Headline, Faritra Marmara, fiarovana, TORKIA
napetraka tao anaty serivisy ny tranofiara bogacay
Ny minisitra Turhan, nandritra ny kabary nataony tamin'ny lanonam-pitondrana ny tugboat miaraka amin'ny rafitra faneriterena efa namboarina nataon'i Sanmar Shipyard, dia nilaza fa nisy indray ny hetsika fanamboarana sambo nijanona saika tany Tuzla, ary ny fandefasana entana tiorka dia nandia fotoan-tsarotra.
ny asany mba hamelombelona ny sehatra dranomasina Turhan Nanazava dia nahita tany tsara toerana ankehitriny, "Torkia, ilay firenena Tiorka, isika isan-karazany ny fanohanana ny miasa ry namana mahatsiaro ny tantsambo. Amin'ny maha Minisiteran'ny ranomasina antsika, dia nanao izay rehetra ilaina izahay mba hanadiovana ny lalan'ny mpanarato ranomasina. Hitanay ny hetsika sy paikady tena lehibe. Nanao fandaharana izahay mba hanomezana lalana ny sehatra tsy miankina. Nentinay tany anaty lisitra fotsy avokoa ny sambonay, izany hoe tamin'ny ligy super miaraka amin'ny fifehezana sy ny fomba tsapany. Mba hizara ireo enta-mavesatra ho an'ireo mpitaingin-dranomasina, dia nampihatra ny fampiharana SIE maimaimpoana izahay. Hatramin'ny 2004, ny salan'isa isan-taona 496 tapitrisa dolara amin'ny sehatra, dia nanolotra efa ho 8 miliara izahay. Ny isan'ny seranan-tsambo iraisam-pirenena dia nitombo hatramin'ny 152 ka hatramin'ny 181. Nitombo ny isan'ireo marinas ny taona 41 ka hatramin'ny 62, ary nitombo hatramin'ny 8 500 ka hatramin'ny 19 ny fahafahantsika mihetsiketsika. Ny fiaramanidina tiorka milay an'ny Tiorka dia nitombo mihoatra ny in-2003 raha oharina tamin'ny taona 3 ka nahatratra 8,9 tapitrisa DWT tamin'ny 28,6 tapitrisa DWT. Mitana ny laharana faha-19 izao tontolo izao ny sidina tiorka tiorka tiorka 15. Miaraka amin'ny fanamafisana ny andraikitry ny firenentsika amin'ny fitaterana an-dranomasina maneran-tany, nitombo avo 5 heny ny fitantanana ny fitaterana ary nahatratra 11 tapitrisa TEU. Ny fitambaran'ny entana mitondra entana dia 190 tapitrisa taonina ary 460 tapitrisa taonina. ”
"Isika dia iray amin'ireo firenena mitarika eo amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo"
Nanamarika i Turhan fa misy ny fampandrosoana revolisiona eo amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo ary sehatra manara-penitra tokoa izy io miaraka amin'ireo vokatra sandan'ny vidiny. Ny toetra miasa amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo ary ny asa be dia be dia manampy amin'ny fitomboan'ny asa ihany koa. Soa ihany, isika dia iray amin'ireo firenena nitarika ny orinasa fanamboarana sambo. Ao anatin'izany, ny andraikitry ny sambon-tsika handrakotra ny moron-dranomasina rehetra avy any Tuzla, izay mitrandraka azy dia mitana andraikitra lehibe. Nandritra ny taona maro izay dia nitombo ny fampiasam-bolan'ny fanjakana sy ny fanohanana momba ny famolavolana, nitombo ny vanim-potoan'ny fanararaotana ny sambo ka hatramin'ny 49 taona, ny fanokafana ny fampiasam-bola, ny vola naloan'ny governemanta dia arivo hetsy fa tsy nandoa ny hofan-trano, ny fanesorana ny adidy ecrimisil, ny sambo manoloana ny trosan'ny trosa. ary ny fankatoavana ny tatitra EIA sy ny drafi-pampandrosoana an'ny sambo. ”
Turhan dia nanambara fa ny indostrian'ny fanamboarana sambo Tiorka dia lasa sehatra manan-danja mahavita manangana sambo miaro ny tontolo iainana mampiasa ny haitao farany ary tokony ho fankasitrahana 81 ireo sambo.
Ny fanamafisana fa ny R & D sy ny fanavaozana dia tsy maintsy ampivelarina mba hananana fanambarana ao amin'ny tsen'izao tontolo izao, hoy i Turhan, biri Iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ity asa ity ny BO isAÇAY 38 Hybrid Tugboat.
Amin'ireo endri-javatra ara-teknolojia hafa amin'ny tug, dia tena ilaina tokoa izy io satria manana ny AVD voalohany eran-tany, ny rafitra mandroso miovaova. Ny fahombiazan'i Sanmar dia mazava ho azy fa tsy kisendrasendra. Mpisava lalana eto amin'izao tontolo izao i Sanmar izay nanamboatra ny sambo-jiro voajanahary voalohany ary avy eo ny tranon-jaza voalohany. Androany, ny hidroan'ny hidroida hidradrano voalohany hanorina hafa voalohany amin'ny anaran'ny firenentsika ary reharehan'ny toe-tsaintsika ny sehatra misy antsika.
Ny fanamboarana hidro Hydraulic Hybraulic voalohany voalohany amin'ny alàlan'ny teknolojia Advanced Variable Drive
Ny lakana namboarina tao amin'ny San Salvador Altınova Sanmar dia natsangan'ny fampidirana ny teknolojia Advanced Variable Drive ho any amin'ny boaty.
Ity fanavaozana izay novolavolaina miaraka amin'ny Caterpillar Propulsion ity dia hanana fitrandrahana ambany kokoa sy ny fanjifana solika ambany. Ny tug, natambatry ny ABS ary izay hanenona ny sainan'i Tiorka, novokarina tamina modely tanteraka amin'ny solosaina.
BOĞAÇAY, izay 24 metatra ny halavany, dia manana hery misintona 70 taonina ary manana rafitra propeller izay afaka mihodina manodidina ny axis azy manokana, dia manana hery 2 500 taonina isan'ora.
Andriamatoa Ali Gürün, filoha lefitry ny Birao Sanmar, dia nanambara fa i BOĞAÇAY 38 dia haondrana any Mexico.
Notsidihan'ny minisitra Turhan ny sambo
Turhan, Sanmar Shipyard amin'ny alàlan'ny rafitra mandrisika ny ambaratonga manaraka taorian'ny lanonana nanirahana ny vaomiera tampon-tsolika tany Altinova Besiktas Shipyard, Hat-San Shipyard ary Altinova Shipyard Entrepreneurs Industry and Trade Inc..
Ankara Metro tender 'bull' stubborn!
Biraon'ny Siansa Manadihady ny tetikasa Boğaçayı
Fanamarihana amin'ny fahazoana: Registre Ballast sy fanamafisana amin'ny vinaingitra dinika ho an'ny milina mitentina ...
Nalefa tamin'ny seranana ny andian-tsambokely Yenimahalle-Şentepe
Ny Balıkesir Gökköy Logistics Center dia nirotsaka tamin'ny lanonana
Ny tetezana teo ambonin'ny reniranon'i Aşkarbeyli dia napetraka tamin'ny serivisy
Mionşe Bus Station Menteşe no nanombohana ny lanonana
Fangatahana Sterilization an'ny Channel Istanbul